अन्तर्वार्तामै वाइबा ड'न र भाले ड'नको हाना*हा'न ! पुण्य गौतमको गयो सात्तो,छुटा'उन हम्मे हम्मे -
Home News अन्तर्वार्तामै वाइबा ड’न र भाले ड’नको हाना*हा’न ! पुण्य गौतमको गयो सात्तो,छुटा’उन...
अन्तर्वार्तामै वाइबा ड’न र भाले ड’नको हाना*हा’न ! पुण्य गौतमको गयो सात्तो,छुटा’उन हम्मे हम्मे
राज्य सञ्चालकले भने साइतमै टीका लगाउनुपर्ने र सर्वसाधारणका लागि मध्याह्न कालमा टीका लगाउन कुनै समस्या नरहेको समितिका अध्यक्ष प्राडा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिएका छन् ।
यस वर्ष यमपञ्चक कात्तिक २७ गतेदेखि शुरु हुन्छ । त्यस दिनदेखि यमदीप दान शुरु गरिन्छ । कात्तिक २८ गते काग तिहार परेको छ । यसैगरी धनवन्तरी जयन्ती, धन त्रयोदशी र धनतेरस पर्व पनि त्यसै दिन परेको छ ।
कात्तिक २९ गते बिहान नरक स्नानसहित कुकुर तिहार र बेलुकी लक्ष्मीपूजा परेको छ । अपराह्न १ः४९ बजेसम्म कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी र त्यसपछि औंशी तिथि लाग्ने भएकाले शास्त्रसम्मत रूपमा पर्वसम्बन्धी निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ ।
सायंकालमा औँशी तिथि परेका दिन लक्ष्मीपूजा गर्नुपर्ने शास्त्रीय वचन छ । औँसी तिथिमा गरिने स्नान, दान भने कात्तिक ३० गते बिहान गर्नुपर्नेछ ।
गाई, गोरु र आत्म ९म्ह० पूजा भने कात्तिक ३० गते गर्नुपर्ने शास्त्रीय वचन रहेको छ । कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाको सायंकालमा आत्मपूजा गर्नुपर्ने ‘कृत्यवाटिका’ नामक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ । आइतबार बिहान ११ः२७ बजेसम्म औँसी तिथि छ । त्यसपछि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा प्रारम्भ हुने भएकाले म्हपूजा यसै दिन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मङ्सिर महिनामा भाइटीका परेकाले दाइलाई टीका लगाउनुहुन्न भनी केही मानिसले चर्चा गरे पनि त्यो शास्त्रसम्मत नरहको समितिले जनाएको छ । शास्त्रीय ग्रन्थमा भ्रातृपूजा भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको र त्यस शब्दले दाजुभाइ दुवैलाई बुझाउने अध्यक्ष गौतमलाई उद्धृत गर्दै राससले जनाएको छ । भाइटीका भनिए पनि ज्येष्ठको क्रमानुसार नै टीकाटाला गर्नु शास्त्रसम्मत हुने समितिले जनाएको छ ।
Previous articleअन्तर्वार्तामै वाइबा ड’न र भाले ड’नको हाना$हान ! पुण्य गौतमको गयो सा’त्तो,छुटाउन हम्मे हम्मे
Next articleसिपाही सँग भागेकी हवलदारकी श्रीमती सम्पर्कमा आइन त ? उदयपुर बाट अन्तिम (हेर्नुस् भिडियो)